GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kikamba Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mongolian Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Mgbe ọ bụla onye nkụzi anyị na-akụziri anyị gbasara otú ahụ́ mmadụ si arụ ọrụ, obi na-esikwu m ike na Chineke dị. Ihe ọ bụla dị anyị n’ahụ́ nwere ihe ọ na-arụ. Ọtụtụ mgbe, anyị anaghịdị ama mgbe ha na-arụ ihe ndị ha na-arụ. Otú e si mee ahụ́ mmadụ dị nnọọ ịtụnanya.”​—Teresa.
“Ọ na-abụ m hụ ọmarịcha ụlọ elu dị́ ezigbo ogologo, ọmarịcha ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụgbọala, mụ ajụọ onwe m, sị, ‘Ònye rụrụ ihe a?’ Ama m na ọ bụ naanị ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ ga-emepụtali ụgbọala n’ihi na e nwere ọtụtụ irighiri ihe a na-ejikọta ọnụ tupu ụgbọala ebido rụwa ọrụ. Ebe ọ bụ na e nwere onye mepụtara ụgbọala, e nwekwara onye kere mmadụ.”​—Richard.
“Ị mata na o were ndị ọkachamara ọtụtụ narị afọ tupu ha amata ntakịrị ihe ha matara gbasara ihe ndị dị n’ụwa na mbara igwe, ị ga-ekweta na onye sị na ihe ndị ahụ nọkatara dịwa echeghị echiche nke ọma kwuo ya.”​—Karen.
“Ka m na-amụkwu sayensị, m bịara na-aghọtakwu na e kere mmadụ eke. Dị ka ihe atụ, m bịara na-ahụ otú ihe niile gbasara ihe ndị dị ndụ si aga n’anya ya n’anya ya, otú anyị bụ́ mmadụ si pụọ iche, otú o si agụ anyị agụụ ịmata ọtụtụ ihe gbasara ụmụ mmadụ, otú anyị si bido dịwa, nakwa ebe anyị na-aga ma anyị nwụọ. Ndị na-ekwu na e keghị ihe eke na-agbalị ịkọwa otú ụmụ anụmanụ si malite ịdị, ma ha enwebeghị ike ịkọwa ihe mere ụmụ mmadụ ji pụọ iche. M ga-asị na e nweghị ezigbo ihe mmadụ ga-eji maka ya kwere na e nweghị Onye Okike, ma e nwere ọtụtụ ihe ga-eme ka mmadụ kwere na e nwere Onye Okike.”​—Anthony.
Burugodị ụzọ mee ka obi sie gị ike na ihe i kweere ziri ezi. Atụkwala ụjọ ma ọ bụ mewe ihere. (Ndị Rom 1:​16) A sịdị kwuwe:
Ọ na-agụ ụmụ mmadụ agụụ igbo “mkpa ime mmụọ” ha. (Matiu 5:3) Ọ na-agụ anyị agụụ ikwere na Chineke dị. Ọ bụrụzie na mmadụ asị na Chineke adịghị, ọ bụghị gịnwa kwesịrị ikwu ihe mere onye ahụ ji kwuo otú ahụ. Ọ bụ onye ahụ kwesịrị ikwu ya.​—Ndị Rom 1:​18-​20.
^ Ebe e si nweta ihe a e kwuru: Social Science Research Council, “Religion and Spirituality Among University Scientists,” by Elaine Howard Ecklund, February 5, 2007.
N’obere vidio a, ndị na-eto eto kwuru ihe mere ha ji kwere na e nwere Onye Okike.
Chineke Ò Kere Obere Ihe Dị Ndụ, Ihe Ahụ Aghọzie Ihe Ndị Ọzọ Dị Ndụ?
Baịbụl anaghị agbagha ihe ndị sayensị chọpụtara na ihe ndị e kere eke dị ndụ nwere ụdị ha dị iche iche.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ È Nwere Onye Kere Ihe Niile Ka Ọ̀ Bụ na E Nweghị?—Agba nke Mbụ: Olee Ihe Mere Ị Ga-eji Kwere na Chineke Dị?
ijwyp isiokwu 28